आधा दर्जन विमानस्थल घाटामा – Sajha Bisaunee
आधा दर्जन विमानस्थल घाटामा
आम्दानी कम हुँदा खर्च धान्नै मुस्किल
प्रदेश नं. ६ मा हाल सञ्चालनमा रहेका सात वटा विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने विमानस्थल हो, हुम्लाको सिमीकोटको विमानस्थल । जसको वार्षिक आम्दानी एक करोड ५४ हजार रूपैयाँ रहेको छ । यसबाहेक अन्य कुनै पनि विमानस्थलको आम्दानी एक करोड छैन ।
यो प्रदेशका सातमध्ये ६ वटा विमानस्थल घाटामा रहेको पाइएको छ । पर्याप्त आम्दानी नहुँदा ती विमानस्थलको खर्च चलाउनै मुस्किल हुने गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यहाँका सातमध्ये एउटा विमानस्थलको मात्रै कमाइ एक करोडभन्दा माथि छ । हुम्लामा सिमीकोट विमानस्थलको कमाइ वार्षिक एक करोड छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि विमानस्थलको आम्दानी एक करोड छुन सकेको छैन । जसले गर्दा ती विमानस्थल सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यहाँका ६ वटा विमानस्थलको कमाइ कम हुँदा सञ्चालन खर्च चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने हुम्लाको सिमीकोटको आम्दानी एक करोड, ५४ हजार एक सय १४ रूपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि व्यस्त मानिने जुम्ला विमानस्थलको कमाइ भने आठ लाख ७६ हजार आठ सय १० मात्रै रहेको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलको ४८ लाख ९५ हजार चार सय ६३, रुकुम सल्लेको एक लाख ४३ लाख सात सय ४१, रुकुम चौरजहारीको एक लाख ११ लाख एक सय ६, डोल्पाको चार लाख ८० हजार तीन सय आठ र रारा विमानस्थलले १७ लाख ३६ हजार ८२ कमाइ गरेका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको कमाइ न्यून रहे पनि थप विमानस्थल निर्माण हुने क्रम भने जारी नै छ । कालिकोटको कोटबाडामा निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । उक्त विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भइ गत वर्ष नै परीक्षण उडानसमेत भइसकेको छ ।
वि.सं. २०४२ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द तथा राजनैतिक दलका स्थानीय नेताबीचको खिचातानीका कारण ३१ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । कालिकोट जिल्लाको कोटबाडा गाविसको सुनथराली गाउँमा बन्दै गरेको यो विमानस्थलमा माघ महिनामा टेस्ट ल्यान्डिङ गर्ने र लगत्तै नियमति उडान गर्ने भनिएपछि त्यसो हुन सकेको छैन ।
अहिले कालिकोट विमानस्थलमा धमाधम काम भइरहेको छ । झण्डै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको कालिकोट विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०४२ सालमा यसको निर्माण गर्ने भनेर बजेट छुट्टाए पनि निर्माणकै काम भने प्राधिकरणले जिम्मा लिएपछि मात्रै सुरु भएको थियो । कालिकोट विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख रत्नबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ६ सय ९० मिटर लामो यो विमानस्थलमा चार सय मिटरभन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको छ । लामो समय निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारसमेत नपाएको यो आयोजना अहिले बल्ल निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ठेकेदारहरू यसको निर्माणको जिम्मा लिन डराएका थिए । कुनै पनि निर्माण कम्पनी इच्छुक नदेखिएपछि यसको निर्माण प्रक्रिया लामो समय अलपत्र भएर बस्यो । तर अब चाँडै निर्माण सम्पन्न गरेर नियमित उडान गरिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित मितिः १८ माघ २०७४, बिहीबार १५:५१